स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: March 2012
रमाको विवाह भएको १ वर्ष भयो। उनी २५ वर्षे युवती हुन्। श्रीमान साउदी अरवमा काम गर्न गएका ६ महिना जति भयो, उनी अहिले आफ्नो नन्द, देवर, सासूससूरासँग बस्छिन्। श्रीमानसँग फोनमा कुरा भइरहन्छ। गत १ महिनादेखि उनीमा एउटा नौलो समस्या देखिएको छ। उनी त्यतिबेला घरमै थिइन्, उनी एक्कासी काम्न थालिन् र बोल्न थालिन् "हेर, म देवी हुँ, तँलाई मार्छु, तँलाई खान्छु, मलाई पूजा गर, बलि चढा नत्र म तेरो सन्तानलाई नाश गरिदिन्छु" आदी इत्यादी। जुन करिब एक घण्टासम्म रह्यो, सारा मानिसहरु जम्मा भए, सबै छक्क परे। एक घण्टापछि उनी जस्ताको तस्तै भइन। कति मानिसले उनलाई 'बोक्सी' भने, कतिले 'देवताको रुप' भने, कसैले 'देवताको पूजा गरी बलि दिएमा निको हुन्छ' भने। तर उनको समस्या त्यसै निको भएकोले त्यो दिन केही गरिएन। तर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गर्दागर्दै पछि उनको समस्या दिनदिनै जस्तो देखिन थाल्यो। उनलाई धामीझाँक्री लगाइयो तर निको भएन। कुखुरा, बोका बलि दिइयो, त्यही पनि निको भएन। अहिले उनी अस्पतालमा मनोरोग विशेषज्ञसँग उपचार गराइरहेकी छिन्। उनको मनमा दविएका कुराहरु बाहिर निकाल्ने(pyschotherapy), साथै औषधीको प्रयोग गर्नाले उनको समस्या विस्तारै निको हुदैं गएको छ।
यस्तो रोगलाई कन्भर्सन डिसअर्डर(Conversion Disorder) भनिन्छ।
मनमा रहॆका आन्तरिक मानसिक पीडाहरु विभिन्न शारीरिक लक्षणका रुपमा बाहिर देखिने रोगलाई कन्भर्सन डिसअर्डर/Conversion Disorder भनिन्छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरु खुल्लारुपमा आफ्नो समस्याहरु बताउन नसक्नु र पीडा सहेर बस्ने गर्नाले महिलाहरुमा यो रोग बढि देखिन्छ। त्यसो त पुरुषमा पनि यस्तो समस्या नदेखिने होइन। हाम्रो वर्षौंदेखिका तीतामिठा अनुभवहरु मस्तिष्कमा जम्मा भई बसेका हुन्छन्। कतिपय यस्ता समस्याहरु मनमा खुल्लारुपमा भने देखिदैनन् तर सपनामा वा अदृश्यरुपमा बोलीमा यी कुराहरु निस्कन्छन्। वास्तवमा यी बेहोसी मस्तिष्क/Subconscious mindमा रहेका पीडादायी कुराहरु बिरामीलाई बाहिरी रुपमा थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अचानक यी पीडादायक कुराहरु एकाएक शारीरिक लक्षणका रुपमा देखिन थाल्छन्। जस्तै: अचानक बोली रोकिने, अचानक हातखुट्टा नचल्ने, काम्ने र देवता चढेको जस्तो बक्ने आदी।
यो रोग आफैंमा अनौठो मानिन्छ। किनभने बिरामीले केही समयको लागि अनौठो लक्षणहरु देखाउँछ र १-२ घण्टामा बिरामी जस्ताको तस्तै हुन्छ। जस्तै: कसैको अचानक खुट्टा नचल्ने (पारालाइसिस) भएर अस्पताल ल्याउनुपर्छ तर स्नायु प्रणालीको जाँच गर्दा, सबै अन्य जाँचहरु गर्दा, सिटी स्क्यान नै गरेर हेर्दा पनि उनमा केही खराबी देखिदैंन। तैपनि बिरामीले खुट्टा भने चलाउन सक्दैन। कोही अचानक बेहोस् हुने, काम्ने, फिज काड्ने पनि गर्ने गर्छन्। यसका लक्षणहरु अरु कसैको उपस्थितिमा मात्रै अर्थात् हेर्ने, देख्ने मान्छेहरु वरिपरि भएको बेलामा मात्रै हुने गर्छ।
कतिपय यस्ता विरामीलाई बोक्सी लाग्यो भन्ने, कुखुरा, बोका बलि दिने चलन पनि छ, जुन ठिक होइन र एउटा अन्धविश्वास मात्र हो।
यो रोगका विरामीहरु कस्ताकस्ता लक्षणहरु लिइ अस्पताल आउँछन्?
यो रोग का लक्षणहरु विभिन्न थरिका हुनसक्छन।
विरामीले 'म अब फेन्ट हुनलागें भनेर अरुलाई बोलाउने र बेहोस हुने", उ बोल्न नसक्ने हुने तर अन्य जाँचहरु गर्दा सबै ठिक हुने। विरामी काम्ने, अर्कै मानिस, देवता जसरी बोल्ने, सिकिस्त विरामी जस्तै हुने, अहिले नै ज्यान जाला जस्तो गर्ने गर्छन्। फेरी केही समयपछि जस्ताको तस्तै हुने।
कोही विरामी अचानक आँखा नदेख्ने भएको बताउँछन्।
कोही विरामी हात वा खुट्टा नचल्ने, हिंड्न नसक्ने भएको बताउँछन्।
कोही विरामी शरीरको संवेदना थाहा पाउँदैनन्। जस्तै हातखुट्टामा छोएको थाहा नहुने।
कोही बोल्न सक्दैनन् र इशारामा कुरा गर्छन्।
कोही दमको रोगीको जस्तो छिटोछिटो श्वास फेर्छन्।
कोही विरामी केही समयका घटनाका बारेमा केही थाहा नभएको बताउँछन् अर्थात् स्मरण हराएको भन्छन्।
कोही विरामी अचानक अर्कै ठाँउमा पुग्छन् र त्यहाँ कसरी आएँ भन्नॆ कुनै जानकारी हुदैंन।
कोही विरामी भने उल्टो कुरा गर्ने गर्छन्। सोधिएको प्रश्नलाई बंगाएर उत्तर दिने सजिलो प्रश्नको उत्तर नदिने तर गाह्रो प्रश्नको उत्तर दिने झुटो बोलेको जस्तो गर्ने गर्छन्।
यो रोग किन हुन्छ?
मानसिक तनावहरु विभिन्न शारीरिक लक्षणहरुमा परिणत हुने/psychological stress converts to physical symptoms भएकोले यसलाई कन्भर्सन डिसअर्डर(Conversion Disorder) भनिएको हो। यो रोग मनमा धेरै कुरा राख्ने र मनको कुरा अरुलाई नभन्ने मानिसमा बढि पाइन्छ। प्रेशर कुकरमा हावा भरिएर चाप बढि भइ अचानक सिट्ठी बजेजस्तै मानिसमा हुने मानसिक तनावले पनि बाहिर निस्कने बाटोको रुपमा शारीरिक लक्षणहरु देखिन्छन्। बेहोसी मस्तिष्क/Subconscious mind वा भित्री मनमा रहेको अन्तरद्धन्द घटाउन गरिएको उपायको रुपमा यो रोगको लक्षणहरुलाई लिइन्छ। यो रोगले तत्कालीन तनावका साथै धेरै वर्ष अघिका तनावले पनि ल्याउनसक्छ।
पहिले यो रोगलाई हिस्टेरिया/Hysteria भनिन्थ्यो र यौनकुण्ठाका कारण यस्तो समस्या हुन्छ भनिन्थ्यो। तर यो कुनै पनि प्रकारका मानसिक तनावका कारण हुनसक्छ र महिलामा मात्र नभई पुरुषमा पनि यस्तो समस्या देखिनसक्छ। पुरै स्कुलका विध्यार्थीहरु अचानक बेहोस् हुन थालेको, देउता चढेको जस्तो बोल्न थालेको घटनाहरु बेला बेलामा समाचारमा सुन्न पाईन्छ, ती घटनाहरु यही रोगका कारण भएका हुनसक्छन। विकीपेडियाको यो लेख हेर्नुहोस्।
केही वर्ष अघि पुर्वी नेपालको एउटा स्कुलमा भएको 'मास हिस्टेरिया/Mass Hysteria' को बारेमा मनोरोग विशेषज्ञ डा. रवी शाक्यले लेख्नुभएको केस रिपोर्ट। यसबाट पनि यस्ता समस्या कसरी शुरु हुन्छ, कसरी फैलन्छ र कसरी उपचार गरिन्छ भनेर थाहा हुन्छ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने विरामीले जानीजानी यस्तो गरेका हुँदैनन, विरामीलाई किन यस्तो गरेको छु भन्ने थाहा नै हुँदैन। विरामीले नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि यस्तो लक्षण रोक्न सक्दैनन। बोक्सी लागेको हो भन्दै विरामीलाई कुट्ने, आगोले पोल्ने आदि अन्धविश्वासका कारण कति मानिसको अकालमा ज्यान गएको पनि पाइएको छ।
नेपालमा यो रोगका विरामी धेरै छन्। सामाजिक रितीरिवाज, धार्मिक विश्वास र संस्कृति अनुसार यो रोगका लक्षणहरु फरक पर्न सक्छन्। नेपालमा डिप्रेशन रोगका विरामी पनि यस्तै लक्षणहरु लिएर आउँछन् तर डिप्रेशनमा यी बाहेक अन्य लक्षणहरु पनि देखिन्छन्।
यो रोगको कसरी उपचार गरिन्छ?
यो रोगको उपचार निकै चुनौतीपूर्ण हुनेगर्छ। विरामीको लक्षणलाई ध्यान दिईरहँदा त्यो अझै बढ्न जान्छ। यो रोगका लक्षणहरु देखिएको बेलामा विरामीको वरिपरि बसी आत्तिएमा लक्षणहरु अझै बढ्न जान्छन्। त्यसैले विरामीलाई अन्य कुरा गरी दिमाग/सोचाइ अन्ततिर मोड्नुपर्छ। विरामीलाई मनका कुरा खुल्लारुपमा भन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विरामीले रोगको सिकायत गर्छ, बढि हेरचाह खोज्छ/Attention seeking behavior भने त्यसलाई महत्व दिनु हुदैंन र निरुत्साहित गर्नुपर्छ। विरामीसँग सकेसम्म थोरै मानिस बस्नुपर्छ। विरामीलाई तत्काल अस्पताल लगी उपचार गराउनुपर्छ। यसरी विरामीको लक्षणलाई बेवास्ता गर्दा रोग निको हुन सहयोग गर्छ। साथै विभिन्न प्रकारका मानसिक अन्तरद्धन्द कम गर्ने औषधीहरुको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टहरुसँग यो रोगको उपचार गराउनुपर्छ।
यो रोग बारे जान्नैपर्ने कुराहरु:
यस्ता विरामीलाई कहिलेकाहीं अचानक श्वास फेर्न गाह्रो हुने, कहिले पूरै निको हुने र कहिले अत्यधिक बढ्ने हुन्छ।
विरामीसँग धेरै मानिसको भीड गर्नुहुदैंन, विरामीको लक्षणलाई वास्ता गर्नुहुदैंन नत्र लक्षणहरु झन बढेर जान्छ।
कति विरामीहरुमा यो समस्या बारम्बार दोहोरिन सक्छ। तर नआत्तिकन लगातार उपचार गराइरह्यो भने २-३ हप्तामा यो समस्या विस्तारै निको हुन्छ।
कतिपय विरामीलाई भूत चढेको, भनी बोक्सी लागेको भनी कुटपीट गर्ने, सजाय दिने गरिन्छ, जुन शतप्रतिशत गलत हो।
-यो लेख मनोरोग विशेषज्ञ डा. सि. पि. सेढाईले लेख्नु भएको हो, जसलाई मैले थोरै परिमार्जन गरेको छु।
यो रोगको बारेमा यस भिडियोबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ।
के हो मास हिस्टेरिया?
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 5:54 PM 32 comments
Labels: Conversion Disorder, Mass hysteria, Psychiatry
आज ८ मार्च, अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस। संसारको आधा आकाश, परिवाररुपी रथ गुडाउने एउटा पाङग्राको रुपमा चिनिने नारीहरुको समानता, अधिकारको लागि आवाजलाई अझ बलियो रुपमा अगाडी ल्याउने दिन।
नारी दिवसको उपलक्ष्यमा म यो ब्लगमा नारी महिला स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सानो चर्चा गर्न चाहन्छु। र व्रिस्त्रितमा चाँही बिस्तारै लेख्दै जानेछु।
संसारको र नेपालको पनि लगभग आधा जनसंख्या भएका महिलाहरुका थुप्रै स्वास्थ्य समस्या पुरुषहरुका जस्तो त हुन्छ नै। तर भिन्न शारीरिक बनावट, गर्भधारण गर्नुपर्ने आदि प्राकृतिक कारणले उनीहरुको स्वास्थ्य समस्या केही भिन्न पनि हुन्छन्।
नेपालका महिलाहरुको कुरा गर्नुपर्दा गर्भधारण र सुत्केरी सम्बन्धी समस्याहरु नै प्रमुख हुन आउँछ। अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीका अभाव, जनचेतनाको कमि, स्वास्थ्यक्षेत्रमा बजेट, स्रोत र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापनको कमि आदी कारणले कैयौं (विशेषगरी गाँउका) गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरुले सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण पनि नपाएको स्थिति छ। सुत्केरी गराउने सम्बन्धी तालिमहरु दिएर गाँउगाँउसम्म त्यो सेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरु भैरहेका छन्, जुन सह्रानिय छन् तैपनि पर्याप्त भने छैनन्।
मलाई यतिबेला मेरो विधार्थीजीवनमा रिसर्च गर्दाको एउटा क्षण याद आयो। हामी एउटा गाँउमा विभिन्न परिवारहरुको विवरण संकलन गर्न गएका थियौं। एउटा परिवारमा श्रीमानसँग विवरण लिईरहेका थियौं, उनी आरामले बसेर हामीलाई भनिरहेका थिए की उनकी श्रीमति गर्भवति छिन् र हामीले "सुत्केरी हुने मिति कहिलेको दिइएको छ" भनी सोद्धा "आजको" भनेर उनले भने। हामीले खुसी भएर सोध्यौं "अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त?" "उ पर खेतमा काम गरिरहेकी छिन्" भन्दै उनले खेततिर देखाए। हामी सबै अचम्ममा पर्यौं।
यस्तो छ हाम्रो समाजको अवस्था।
कहिले जानीजानी र कहिले सामाजिक प्रवृति, चालचलनका कारणले हाम्रो समाजमा महिलाहरुका स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मात्र यस्ता समस्याको समाधान कदापी हुनसक्दैन। यसमा सामाजिक अगुवाहरु, सामाजिक कार्यकर्ता, गाँउघरकै सदस्यहरु, संचार माध्यम, नीतिनियम निर्माणकर्ता आदी सबैको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, गाँउघरका कैयौं गर्भवती महिलाहरु आइरन चक्की र फोलिक एसिड जस्तो गर्भका बेला अत्यावश्यक औषधी पनि खान पाइरहेका हुदैंनन्। अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्भ रहेका बेलामा कम्तिमा ३ पटकसम्म चिकित्सकसँग जाँच गराई भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने भनेर भनिए पनि एकपटक अस्पतालको मुख देख्न पनि मुस्किल पर्ने ठाँउहरु पनि हाम्रो देशमा छन्। त्यस्तै सुत्केरी हुने बेलामा बढी रक्तस्राव, बच्चा अड्कने, लामो व्यथा लाग्ने आदी समस्यामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र सुविधायुक्त स्वास्थ्यकेन्द्रका अभावमा कैयौं महिलाहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको दु:खद समाचार बेलाबेलामा सुन्न, पढ्न पाइन्छ।
त्यस्तै अर्को समस्या भनेको आङ खस्ने रोग/Uterine prolapse पनि हो अर्थात् पाठेघर तल खस्ने समस्या। आजभोलि गाँउगाँउमा यसको उपचारका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु गरेर जनचेतनाको कारणले यो समस्या धेरै बाहिर आएको छ। यो समस्याका मुख्य कारणहरुमा धेरै बच्चा जन्माउनु, सुत्केरीको बेलामा लामो व्यथा लाग्नु, महिनावारी रोकिएपछि हर्मोनहरुको कमि हुनु आदी पर्दछन्।
त्यस्तै महिनावारीका समस्याहरु पनि महिलाका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरुमा पर्छन्। महिनावारी भनेको महिलाको शरीरमा स्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको मात्रामा उतारचढाव आउनाले हुने प्राकृतिक प्रकृया हो, यसले महिलाको पाठेघरलाई गर्भधारणका लागि तयार पार्ने काम गर्छ। यति सामान्य जानकारीका अभावमा मानिसहरु महिनावारी भएका महिलाहरुलाई अझै पनि घर पस्न नदिने, बाहिर छुट्याएर राख्ने गर्छन्। छाउपडी प्रथा यसको एउटा उदाहरण हो। हुन त यो समस्या स्वास्थ्यसम्बन्धी भन्दा पनि एउटा सामाजिक समस्या हो। चेतनाको अभाव, पहिलेदेखिको चालचलन, अन्धविश्वास आदीका कारणले समाजमा यस्तो भैरहेको हुन्छ।
महिला स्वास्थ्य समस्यामा अर्को भनेको विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरु पनि हुन्। यसमा हाम्रो देशमा बढि हुने भनेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर/Cervical Cancer हो। जनचेतनाका अभावमा शुरुमै पत्ता लाग्न सक्ने र उपचार गरेर निको हुनसक्ने यो रोग अस्पतालसम्म निकै ढिलो आइपुग्छ। प्याप स्मियर टेस्ट/PAP smear test जस्तो सामान्य जाँचबाट यसलाई शुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पाठेघरको क्यान्सर, डिम्बाशयको क्यान्सर, स्तनको क्यान्सर आदी पनि महिला स्वास्थ्यका समस्याहरु हुन्।
नेपाली महिलाहरुका केही मुख्य स्वास्थ्य समस्याहरु माथि भनिएपनि यी पूर्ण भने होइनन्। साथै सामाजिक रुपमा पछाडी पारिने महिलाहरुका यी स्वास्थ्य समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि यसका बारेमा जनचेतना जगाएर स्वास्थ्यकर्मी र सुविधायुक्त स्वास्थ्यकेन्द्रको सहज पहुँच बनाउनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यकता छ सामाजिक कार्यकर्ताहरु नीतिनियम निर्माताहरु र जनसहभागिताको।
महिलाका स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरु:
१. महिनावारी सम्बन्धी समस्याहरु,
महिनावारीको गडबडी, महिनावारी अघिको समस्या (प्री मेन्सचुरल सिन्ड्रोम)
२. महिनावारी रोकिएपछि आउने समस्याहरु,
मेनोपजल सिन्ड्रोम र त्यसका असरहरु
३. गर्भ र सुत्केरी सम्बन्धी समस्याहरु,
एन्टीनेटल, नेटल र पोस्टनेटल समस्याहरु
४. गर्भपतन सम्बन्धी समस्याहरु,
५. पिसाबका नलीको र प्रजनन अंगहरुको संक्रमणहरु,
७. स्तन सम्बन्धी समस्याहरु,
स्तन दुख्ने, स्तनमा आउने गाँठागुँठिहरु, स्तनको क्यान्सर
८. प्रजनन अंगहरुका क्यान्सरहरु
पाठेघर, पाठेघरको मुख, डिम्बाशय आदीको
अन्र्तराष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा सबै महिलाहरु, महिलाको विकास, सशक्तिकरण र सम्बर्धनमा लाग्नुहुने सबैलाई हार्दिक शुभकामना।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 9:52 AM 27 comments
नारी दिवस र नारी स्वास्थ्य/ Women's day & Women's ...